गायक आर. के को ‘सुपारी खान’ मा धन्जित र निरान्जलीको रोमान्स (भिडियोमा हेर्नुहोस) – Easykhabar : Get News Easily
गायक आर. के को ‘सुपारी खान’ मा धन्जित र निरान्जलीको रोमान्स (भिडियोमा हेर्नुहोस)
गायक आर. के लामाको आवाजमा रहेको ‘सुपारी खान’ बोलको गीत सार्वजानिक भएको छ । पछील्लो समयमा मोडलिङ यात्रामा दर्शकको मन मुटुमा रहन सफल मोडल धन्जित लामा र निरान्जली लामाको अभिनय समेटिएको उक्त गीत दश म्युजिकबाट सार्वजानिक गरिएको हो ।
मोडल धन्जितले अभिनय गरिएको दर्जनौ भिडियो हिट छन । फरक शैलिको यो भिडियोमा उनले उत्कृष्ट अभिनय गरेको दर्शकहरुको राम्रो प्रतिकृया छ । गीतमा सङ्गिता थापा मगरको शब्द,एन बि थापा मगरको सङ्गित,आर के लामाको स्वर रहेको छ । भिडियोमा मोडल धन्जित लामा,मन्जित लामा,सुचन्द्र लामा र निरान्जली लामाको अभिनय समेटिएको छ । ग्यानेन्द्र शर्मा हुमागाइले छायांकन गरेको उक्त भिडियोलाइ अमृत चापागाइले सम्पादन र रन्जित लामा र प्रेम लामाले निर्देशन गरेका हुन ।